By Dhakaram Sapkota
Publisher: Mandap Book
First Publish Year: 2075
... “देश र जनताको सेवा गर्न एमाले फेरि सरकारमा जानुपर्छ यो मेरो अन्तिम इच्छा हो' भन्ने मनमोहन अधिकारीको भनाई रहेको थियो । वि.सं. २०५५ साल चैत्रको अन्तिम हप्तामा चुनावी प्रचारका क्रममा बानेश्वरमा आयोजित बृद्धबृद्धाहरूको विशेष बाहुल्यता रहेको थियो । त्यस कार्यक्रमका बीचबाट एकजना दर्शक उठेर मनमोहन अधिकारीलाई अङ्कुशे कलात्मक लौरो उपहार दिएका थिए । त्यसक्रममा उहाँले ‘मलाई लौरो दिएर बुढो ठान्नु भएको ? म बुढो भएको छैन तन्दुरुस्त छु एमालेको बहुमतको सरकार नल्याई मर्ने छैन' भन्दै उपस्थित सबैलाई युवाको जस्तो जोश देखाउनु भएको थियो । उहाँ चुनाव लडेको क्षेत्रका बस्तीबस्तीबाट मनमोहनको मुख त देख्न पाऊँ न हामीलाई अरू के चाहिएको छ र ? भन्ने खबर आइरहेका थिए । आफ्नै क्षेत्रको उम्मेदवारसँग भेट्न र केही भनाई राख्न खोज्नु स्वभाविक पनि थियो ।...
USD 5.00Binod Sijapati